Yini iholide 2020 elisifundise ngayo ngamasu wokumaketha weselula ngo-2021 | Martech Zone
Akunakuphikwa ukuthi, kepha isikhathi samaholide e-2020 besingafani nanoma yimuphi omunye esake sabhekana nawo njengobuciko. Ngemikhawulo yokuhlukaniswa kwezenhlalo ephinde yabamba emhlabeni wonke, isimilo sabathengi sisuka ezinkambisweni zendabuko.
Kubakhangisi, lokhu kuqhubeka nokusisusa kumasu wendabuko na-Out-Of-Home (OOH), futhi kuholele ekuthembekeni kokuzibandakanya kwamaselula nedijithali. Ngaphezu kokuqala ekuqaleni, okungakaze kube khona ngaphambili kuvuke amakhadi ezipho okunikeziwe kulindeleke ukuthi kwandise isikhathi samaholide size sifike ku-2021.
Abathengi abagcini ngokuchitha imali eningi kumakhadi ezipho (17.58%) kulo nyaka, kepha bathenga amakhadi ezipho kaningi (+ 12.33% YoY).
Ukuqamba imiyalezo yamaholide nokukhuthaza ukuthenga ngeziteshi zeselula nezedijithali kuzoba yikhono elidingekayo kubakhangisi ukuthi balamukele eminyakeni eminingi ezayo.
Ama-70% wamakhadi ezipho ahlengwe zingakapheli izinyanga eziyi-6 ethengiwe.
Ngenkathi ukukhangisa kwamaselula kudala kwaba nomthelela, kufanele sazi izinselelo zako ezihlukile: abathengi abaphendukela ezitolo ezikrinini ezincane basho indawo encane yokukhangisa. Ngaphezu kwalokho, amandla okupheqa kumadivayisi eselula asho ukuthi ukunakwa kubude bufushane kunakuqala phakathi kolwandle lwezikhangiso ezifanayo.
Lokhu kwenza kubaluleke kakhulu ukusetha umkhiqizo wakho uhlukaniswe, uqiniseke ukuthi imilayezo yokudala ithumela imilayezo efanele kahle, ihlale kahle nabathengi abangaba khona, nezenzo zokushayela eziholela emiphumeleni oyifunayo. Isinyathelo sokuqala sokubonisa ukuthinta komuntu siqu kubathengi sivela kwinqubo yokudala ngemuva kokumaketha komkhiqizo wakho.
Qala ngohlelo lwegeyimu namathuluzi afanele
Isinyathelo sokuqala esibalulekile ngaphambi kokubhala igama lekhophi ukuqonda izinsika ezimbili ezibalulekile:
Ufuna bani finyelela?
Ini isenzo ufuna bathathe?
Ngaphambi kokumba ekuthumeleni imiyalezo nezithombe, qala uthathe isinyathelo emuva bese ucabanga ngalokho ozama ukukufeza. Ngabe uzama ukuqwashisa ngomkhiqizo wakho? Ingabe wethula umkhiqizo omusha emakethe? Ngabe uzama ukukhuphula ukuthengisa?
Esimweni esingumahamba nendlwana, kungenzeka ukuthi zonke lezi zinhloso zingeke zenzeke, kepha ngohlelo lomdlalo olulungile, ungakha umkhankaso ngokuphakamisa ngokwengeziwe ukwakha ukuzibandakanya kuzo zonke lezi zinhloso. Lokhu kucabanga okuqondile kuzokuvumela ukuthi usike ngomsindo futhi wakhe umzuzu womkhiqizo onomthelela.
Iba Nokuhlanganiswa Okubanzi Kwamathuluzi Ongakhetha Kuwo
Lapho usubeke isu namasu acacile, gxila kumathuluzi. Kukhona uhla oluphelele lwamathuluzi okusiza ukuqiniseka ukuthi ukusebenzisa kwakho ubuciko kuyaphumelela — izitholi zokulondoloza, amakhono emidiya acebile, ividiyo, okuqukethwe komphakathi okukhona, nokuningi.
Ukuhlangana ngokwamadijithi, ukuncika kumathuluzi edijithali njengokusebenzisana nokwenziwa kwegeyimu kuya ngokuya kuba yizakhi zokwakha imikhankaso ephumelelayo nokusiza imikhiqizo ivelele. Kungakhathaleki ukuthi kunamaphakethe wokudala, ukuzibandakanya kanye nokubizelwa esenzweni ngokusobala kubalulekile ekuthumeleni imiyalezo ehlangana nabathengi ngazo zombili izindlela ezizwakalayo nezinomthelela.
Faka okuqukethwe kwekhadi lesipho lapho kufanele khona
Njengoba kunikezwe ukukhuphuka okusheshayo kwe- Amakhadi wesipho kule sizini samaholide, khangisa amakhadi akho ezipho futhi ungeze iziphakamiso ezifanele ukukhuthaza ukusetshenziswa. Lokhu kufaka izixhumanisi eziwusizo kuyo yonke imilayezo evumela abasebenzisi ukuthi bahlole izilinganiso futhi bathole izincomo ezifanele ngokuya ngokuthenga kwangaphambilini ukuze labo abathola ikhadi lesipho bathole ugqozi ngokuya ngamathrendi womthengi ngokuhlanganyela noma imikhuba yokuziphatha yokuthenga ethile. .
Izindaba Zempumelelo Ekukhuthazeni Isu
Ngaso sonke isikhathi esiyinselele kubakhangisi, kukhona abawinile ngokwemvelo; ama-brand aqhekeze umsindo ngamasu acabangayo, ukudala okudala, nesethulo esinamandla. Nayi eminye imikhankaso ehlanganise ngayinye yalezi zinto ukwakha amasu wokuwina:
Izinkatho Ezinkulu! - Lo mthengisi waseMelika udale i- umkhankaso eletha imininingwane yansuku zonke ngezipho neziphesheli kubathengi. Le yunithi yokudala ihlanganise igalari eswayiphekayo yokuqukethwe ne-animation kuhlaka ngalunye, equkethe into eyingqayizivele, egqwayizayo yokuzibandakanya nabathengi nangaphezulu. A Thenga manje inkinobho yokubizela esenzweni (i-CTA) bese iholele ekhasini lokuthenga lomkhiqizo. Lokhu kube yimpumelelo yokudala ekuhlanganiseni kwayo amandla wezokuxhumana acebile nezithombe ezimnandi, eziyinqaba.
UJosh Cellars - bathathe indlela yendabuko emkhankasweni wabo womkhankaso weholide, basebenzisa isikrini esigcwele, ividiyo enomthelela omkhulu. Izithombe ezithokomele zewayini ezithelwa eduze komlilo odumayo zakha ikesi lokusebenziseka elihle lomkhiqizo, futhi lakha inani elingaphatheki lomkhiqizo ngaphandle kokufuna ubuciko kumbukeli. I- ikhasi lokufika lilula futhi linamandlat, equkethe imiphakathi yabo emibili ephezulu enesixhumanisi sokuthenga iwayini manje.
INGCEBO - umphakeli wamazwe omhlaba wamathuluzi kagesi namabhethri asebenzise umkhankaso onetimu weholide lapho i-animation yokuvula isondeze isitaki samaphakeji abo kumatimu abo ombala nangamathuluzi abo kagesi. Ukuchofoza abathengi be-CTA kwaholela kokungashintsheka, ngamalambu eholide aboshwe phezulu, lapho ungathenga khona ngamadili amathathu ahlukene. Ukuqhubeka nokuzibandakanya kuholele ababukeli ekhasini lemininingwane lomkhiqizo kanye nasendaweni yokuthola izitolo ukuthola umthengisi oseduze kakhulu othengisa imikhiqizo yabo. Lo mkhankaso wenze umsebenzi omuhle wokuhlanganisa ukugqwayiza kwemidiya ecebile nokusebenzisana ukwenza iyunithi ebandakanyekayo eqhuba ukuqwashisa ngomkhiqizo / ngokuthengiselana, kanye nethuluzi elihle lokuthola umthengisi oseduzane.
Ukuphumelela kuleli holide nangaphezulu kuzodinga izinkampani ukuthi zibeke phambili imikhankaso yokudala eyenziwe ngabathengi edonsela kubathengi ngokuxhumana, ukuthumela imiyalezo okunenjongo, kanye nokwenziwa kwegeyimu. Futhi yize lokhu kungahluka, nakhu ukusebenzisa ngokunenzuzo le sizini samaholide. Hlala uphephile!
Tags: inkatho enkuluizitayela zomthengishayela esenzweniukukhuliswaukuhlengwa kwekhadi lesiphoUkusetshenziswa kwekhadi lesiphoAmakhadi wesiphoizitayela zokuthenga ngamaholideukusebenzisanaamasela kaJoshukukhangisa okuhambayoOOHngaphandle kwekhayangaphandle kokukhangisa ekhayastihlukukhangisa kwendabuko